कानुनका कुरा – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श / कानुनका कुरा
July 5, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श Leaveacomment
म अमेरिका सन् २००९ मा बी–२ भिसा लिएर आएको थिएँ। बी–२ भिसा एप्लाई गर्दा म विवाहित भनेर देखाएको थिएँ। मेरो श्रीमतीसँग सम्बन्ध खराब भएकाले मेरो अमेरिका आएपछि केही पनि सम्बन्ध हुन सकेन। मेरो अहिले एक अमेरिकी युवतीसँग केही वर्षको सम्बन्धपछि विवाह गर्ने स्थितिको सम्बन्ध कायम हुन गएको छ। नेपालमा सम्पर्क राख्दा मेरो श्रीमती केही वर्षदेखि कहाँ छिन् भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन। अमेरिकी महिला विवाह गरी छिटोभन्दा छिटो मेरो ग्रीनकार्डका लागि प्रोसेस गर्न तयार छिन्। मैले मेरो विवाह भएको र अहिले सो श्रीमतीको ठेगाना पत्ता नलागेको भन्दा उनी छक्क परेकी छिन् र पारपाचुके गर्ने सल्लाह दिएकी छिन्। मैले अहिलेसम्म अमेरिकामा मेरो विवाहका बारेमा कुनै जिकिर गरेको छैन र अब यो नयाँ विवाह कसरी गर्ने भनी अन्योलमा परेको छु। अब मेरो प्रश्न यो छ कि के मैले मेरो पहिलो विवाह उल्लेख नगरी, यो अमेरिकी महिलासँग विवाह गरी ग्रीनकार्डको प्रोसेस गर्न सक्छु होला? यदि मैले मेरो पहिलो नेपाली श्रीमतीसँग पारपाचुके गर्न परे कसरी गर्ने होला? यो दुःखीलाई जबाफ दिनु भएमा धेरै आभारी हुने थिएँ।
– आर. नेपाली, अमेरिका
सर्वप्रथम तपाईं विवाहित भइसक्नुभएकोले पहिलो श्रीमतीसँग डिभोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ । एकैचोटि दुई जनासँग विवाह गर्न नमिल्ने कानून भएकाले यदि तपाईंले अहिलेको अमेरिकी युवतीसँग विवाह गरे पनि सो स्वतः बदर हुनेछ । त्यसैले सर्वप्रथम नेपालमा भएको श्रीमतीसँग डिभोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईंले डिभोर्स नगरी यो अमेरिकी महिलासँग विवाह गरी ग्रीनकार्डको पेटिसन÷एप्लिकेसन फायल गर्नुभयो भने पनि युएससीआईएसलाई तपाईंको हिस्टोरी फाइलबाट वा युएस एम्बेसीको भिसा रेकर्डबाट तपाईं विवाहित भएको भन्ने देखिन आउनेछ । यस अवस्थामा युएससीआईएसले तपाईंको दोस्रो विवाहलाई भ्वाइड मात्र नभई तपाईंले युएससीआईएसलाई फ्रड गरेको ठानी चार्ज लगाउन पनि सक्छ । त्यसैले पहिलो विवाहलाई टर्मिनेट गरेपछि मात्र दोस्रो विवाह गर्ने सल्लाह छ ।
अब तपाईंको पहिलो श्रीमती फेला परे वा नपरेमा कसरी पारपाचुके वा डिभोर्स गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा नै डिभोर्स गर्ने भए नेपालको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईंको श्रीमतीको ठाउँ, ठेगाना थाहा भए अमेरिकाको अदालतमा नै पनि डिभोर्स पेटिसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ । तर, तपाईंले पहिलो श्रीमतीलाई डिभोर्सको पेपरहरु, पर्सनल सर्भिसद्वारा नेपालमा वा उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सर्भ गरी त्यसको सर्टिफाइड प्रमाण युएसको कोर्टमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जब तपाईंको डिभोर्स नेपालको अदालतमा वा युएसको कोर्टमा फाइनल हुन्छ । त्यसपश्चात् मात्र तपाईंले सो अमेरिकी महिलासँग विवाह गर्न सक्नुहुनेछ र ग्रीनकार्डका लागि आवश्यक पेटिसन÷एप्लिकेसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ ।
Previous अतिथि देवो भवः अभियान शुरू
Next सशस्त्र भित्र फेरि एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल !
कानूनी स्तम्भमार्फत महत्वपूर्ण कानूनी सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा विश्व सन्देश साप्ताहिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद ! …